Nagu saabsan - Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sannadkii 2000. Waa shirkadda ugu awoodda badan uguna saamaynta badan ganacsiyada soo socda: adeegyada hal-joogga ah ee Golaha PCB, nuqulka PCB, PCB clone, IC Crack, PCB design, decryption IC, design chip chip, processing SMT, PCB been abuurka , waxsoosaarka tusmada iyo khaladka.
Waxaan ku baraneynaa 1-38 lakab PCB si dhaqso leh, dayactirka iyo horumarinta aaladaha dhammaan qalabka caafimaadka, iyo qalabka kontoroolka otomaatiga ah, iyo aaladaha isgaarsiinta guurguura. Shenzhen Sichi Technology Co., LTD waxay leedahay in kabadan 100 softiweer iyo injineerro hardware ah oo ku xeel dheer khibrad qani ah oo loogu talagalay go'aaminta chip, IC Crack, MCU unlock, IC analysis analysis/ASM Code, chip gubis iyo aqoonsiga moodeelka, PCB cloning iyo wax soo saarka ballaaran.
Waxaan leenahay faa'iido qiimo leh oo naxdin leh iyo heerka guusha. Aad u yaqaana qalabka caafimaadka iyo caafimaadka, qalabka koontaroolka warshadaha iyo looxyada ciyaarta oo la dhejiyay. Waayo -aragnimo qani ah oo loogu talagalay go'aaminta chip, tayada iyo qiimaha waa la dammaanad qaaday. Waxaan bixin karnaa taageero farsamo oo elektiroonig ah oo ku habboon waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay hubiyaan in sameynta badeecad wanaagsan. Waxaan had iyo jeer sahaminnaa kuwa kale ma gaari karaan aagagga teknolojiyadda, oo waxaan si joogto ah u hagaajineynaa astaamaha adeegga teknolojiyada, si aan uga caawino dad badan inay ku riyoodaan hodantinimadooda waqti gaaban.
Shenzhen Sichi Technology Co., LTDwaxay leedahay in kabadan 100 softiweer iyo injineerro ku takhasusay khibrad hodan ah oo loogu talagalay go'aaminta chip, IC Crack, MCU furo, IC falanqaynta gadaal/ ASM Code, gubashada gubashada iyo aqoonsiga moodalka, PCB cloning iyo soosaarka ballaaran. Waxaan leenahay faa'iido qiimo leh oo naxdin leh iyo heerka guusha. Aad u yaqaana qalabka caafimaadka iyo caafimaadka, qalabka koontaroolka warshadaha iyo looxyada ciyaarta oo la dhejiyay. Waayo -aragnimo qani ah oo loogu talagalay go'aaminta chip, tayada iyo qiimaha waa la dammaanad qaaday. Waxaan bixin karnaa taageero farsamo oo elektiroonig ah oo ku habboon waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay hubiyaan in sameynta badeecad wanaagsan. Waxaan had iyo jeer sahaminnaa kuwa kale ma gaari karaan aagagga teknolojiyadda, oo waxaan si joogto ah u hagaajineynaa astaamaha adeegga teknolojiyada, si aan uga caawino dad badan inay ku riyoodaan hodantinimadooda waqti gaaban.
• Qaabka PCB
• IC dillaac
• Qeexitaanka Chip
• PCB iyo PCBA koobiyeynta
• PCB iyo dhejiska PCBA
• Golayaasha PCB
• PCBA OEM iyo ODM adeegga hal-joogga ah
• PCBA qaybaha dayactirka/beddelka/dayactirka
PCBA -gaaga si baaxad leh ayaa loo adeegsadaa
• Qalabka Caafimaadka
• Qalabka Xakamaynta Warshadaha
• Codsiyada Isgaarsiinta
• Warshadaha ciidanka
• Dhammaan alaabta elektaroonigga ah
• In ka badan 10 sano oo waayo -aragnimo ah
• In ka badan 60 shaqaale R iyo D xirfadle ah
• Warshadda 1100sq.m baaxadda ugu weyn iyo shirkadda ugu xirfadda badan arimahan Shiinaha
• IC crack: lambarka mashiinka iyo 2 jajab muunad ayaa la siin doonaa imtixaanka
• Nuqulka PCB/PCBA: BOM, PCB iyo SCH ee Protell 99SE ayaa la bixin doonaa
• PCB/PCBA clone: ​​lambarka mashiinka, BOM, PCB, SCH iyo 2 loox muunad ayaa la bixin doonaa
• Waxaa lagu heli karaa 12 khad oo dhammaantood waxay samayn karaan alaabada RoHS
• Cabbirka ugu sarreeya ee PCB mashiinkeena SMT ayaa samayn kara: (L) 457 x (W) 356mm
• Cabbirka ugu yar: (L) 50 x (W) 50mm/Cabbirka ugu yar ee QFP: 45 x 45mm
• Tilmaan: 0.3mm
• Cabbirka ugu yar ee chip: 0201
• Mashiinadu waxay kaloo samayn karaan BGA, CSP, LLP, iyo qaybo kale oo badan oo baakad gaar ah ah
• Awoodda guud: 10 milyan oo jibbaar/maalin (laba wareeg)
• Waxaa jira 10 M/I (mowjad alxanka), saddex ka mid ah waxaa loogu talagalay badeecadaha RoHS waxaana lagu ballaarin karaa toddoba khad
• Qaybaha M/I (sida resistor axis, capacitor iyo diode) si otomaatig ah ayaa loo qaabayn karaa
• Baaxadda ugu badan ee PCB waxay samayn karaan: (L) 550 x (W) 350mm
• Cabbirka ugu yar: (L) 50 x (W) 35mm
• Waxaa lagu heli karaa lix khadadka gudbinta oo ku jira xalka RoHS
• Dhammaan khadadka waxay samayn karaan badeecooyin yaryar sida MP3, MP4 ciyaartoy, iyo taleefannada gacanta
• Bixi adeegga leexashada iyo tusaalaha